कुस्मीसेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी एक स्टाफ नर्स १४ वर्ष देखी सम्पर्कबिहीन ! – ebaglung.com
२०७४ चैत्र २५, आईतवार २१:५३	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बिजय राना, कुस्मीसेरा, २०७४ चैत २५ । जैमिनी नगरपालिका वडा न. १ कुस्मीसेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक जना कर्मचारी १४ वर्ष देखि अनुपस्थित भएको भेटिएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी स्टाफ नर्स चित्रकला शर्मा विगत १४ वर्ष देखि अनुपस्थित रहेको पाईएको हो । कुस्मीसेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी रहे पनि जैमिनी नगरपालिका ८ छिस्तीकी शर्मा विगत १४ वर्ष देखी सम्पर्कविहीन छन् ।
समाचार श्रोतका अनुसार शर्मा विदेशमा भएका कारण अनुपस्थित भएकी हुन् । पूरा कर्मचारी नहुँदा केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेको स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा बिरामीको चाप बढ्दा कर्मचारीको अभाव खड्कीने एक जना कर्मचारीले ईबागलुङलाई बताए ।
पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बिमाका कारण सामान्य बिरामी हुँदा पनि अस्पतालमा जाने गरेका कारण केन्द्रमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ । चौबिसै घण्टा इमेर्जेन्सी सेवा सञ्चालित केन्द्रमा अहिले औषतमा दैनिक ५० जना बिरामी आउने गरेका छन् । चौबिसै घण्टा इमेर्जेन्सी सेवा र स्वास्थ्य बिमाको कारण बिरामीको संख्या बढे संगै अस्पतालमा कर्मचारीको अभाव महसूस हुने गरेकोे केन्द्रले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७२ अनुसार २ वर्ष लगातार हाजिर नभए स्वतःखारेज हुने व्यवस्था भए पनि अहिले सम्म कुनै पनि कार्वाही हुन सकेको छैन ।
यसबारेमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले कार्वाहीको प्रक्रियामा रहेको बतायो । कार्वाहीको प्रक्रिया लामो र झन्जटिलो हुने भएको बताउँदै लामो समय अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई कार्वाही भने अवश्य हुने जानकारी दियो ।
केन्द्रमा २ जना डाक्टर, एक जना स्वास्थ्य सहायक, २ जना अहेब, ३ जना अनमी, १ जना ल्याब एसिस्टेन्ट र ४ जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् ।